Ikhukhamba yaselwandle: Iimpawu, indlela yobomi kunye nokuzala | Ngeentlanzi
Namhlanje asizukuthetha ngentlanzi njengoko sihlala sisenza ixesha elininzi. Namhlanje sifumana into eyaziwayo, kodwa engaziwayo kwangaxeshanye. Imalunga nayo Ikhukhamba yolwandle. Sisilwanyana esinomzimba omile okombungu kwaye sihlala kulwandle lwehlabathi liphela. Okwangoku malunga ne-1400 yeentlobo ezaziwayo, ke kufanelekile ukuba uhlalutyo olunzulu.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngekhukhamba yolwandle? Funda kwaye uza kufunda yonke into ngaye.
3 Ukutya ikhukhamba yolwandle
Ikhukhamba yolwandle yeyephylum yee-echinoderms kunye neklasi yeholothuroids. Igama lekhukhamba yaselwandle livela kukufana okukhulu okukhoyo nemifuno, nangona isisilwanyana hayi isityalo.
Eyona nto ibalaseleyo ngale echinoderm yimilo kunye nokuthamba kolusu lwayo. Iphatha ubume ngokungathi sisikhumba, kodwa ngokubonakala okufana nejeli. Ekuboneni kokuqala, sisilwanyana esinokuthi ngempazamo sithathe i-slug. Kuxhomekeka kwindidi ubude bayo bunokwahluka. Nangona kunjalo, kunokuthiwa umyinge umalunga ne-20 cm ubude. Kukho iikomkomere zaselwandle ezinobungakanani obungaphantsi kwe-cm enye okanye ezinkulu.
Ulusu ikhukhamba yolwandle ekhethekileyo kulo linombala weentlobo ezininzi. Singayifumana ngombala omdaka, oluhlaza womnquma okanye omnyama kwaye inolusu olucekeceke. Kuxhomekeke kwindidi oku kunokuhluka kancinci. Inkangeleko enjengeentshulube enayo iyenza ikwazi ukuziqhelanisa nolwandle ngaphandle kwengxaki yokusinda kwayo.
Kufuneka sikhumbule ukuba kulwandle, uxinzelelo lwamanzi luphezulu kakhulu, ke uninzi lweentlobo ezininzi luphela lune-gelatinous texture ebanceda ukuba baphile kwezi meko. Ukuba akunjalo, masikhumbule ukulahla intlanzi njengenye yezona zimbi emhlabeni kuphela ngenxa yokuthungwa kwayo okunika olo hlobo lunqabileyo.
Ikhukhamba yolwandle inodonga lwangaphandle lomzimba wayo olwenziwe yi-collagen evumela ukuba iguqule ukumila kwayo ngokucinezela kwamanzi akhoyo ngalo lonke ixesha. Ndiyabulela kobu buchule bokwandisa okanye ukwenza isivumelwano ngomzimba wakho ngokuthanda iyakwazi ukungena okanye ishiye imingxuma yeendawo zokufihla intloko apho zizimela khona kumarhamncwa.
Ezi zilwanyana zisebenzisa zonke iinyawo zetyhubhu ekufuneka zikwazi ukusasaza ngaphezulu kommandla omkhulu. Ezi nyawo zinemisebenzi ethe-ethe ebanceda bazi zonke izinto ezibangqongileyo ukuze babone ukuba basengozini na okanye hayi.
Njengoko besesitshilo, unokuhlala phantse kuyo nayiphi na imeko yolwandle, kuba zisasazeke phantse kuwo wonke umhlaba. Nangona kunjalo, zinokufumaneka rhoqo kumanzi anzulu amanzi anetyuwa. Ifikelela kwelona nani liphezulu kwiindawo ezikufutshane nemifula yeekorale.
Ikhaya elithathwa ngokuba likhuselekile zezi zilwanyana likwimeko yokuhlangana. Ke ngoko, kuyingozi kubo xa kuphuma umsinga kwaye kufuneka baye emanzini anzulu kufutshane nemijelo yolwandle. Kukule ndawo ikhuselekileyo.
Kuxhomekeka kwindalo esiyihlalutyo, sinokufumana izilwanyana ezineshumi elinambini elinikezelwe ukumba ukutya kwizithambisi ezithambileyo okanye ezinye ezinokudada kwaye zibe ngamalungu eplankton. Ngenxa yoku bahambisa umbulelo kumsinga wamanzi.
Ukuziva ukhuselekile zibekwe kwimingxunya okanye zingcwatyelwe kwimiqolo ethambileyo. Ngale ndlela banokuzimela kumarhamncwa ukuze bangabonwa kukukhanya.
Ngokubhekisele kwindawo yokuhambisa, sifumana indawo enkulu kakhulu. Inokufumaneka kwinxalenye yeAsia yoLwandlekazi lwePasifiki nenani elikhulu labantu. Ukukwazi kwayo ukusasaza kwiindawo ezininzi eziphilayo ngenxa yesakhono sayo sokuziqhelanisa nobude obahlukeneyo kunye namaqondo obushushu.
Ukutya ikhukhamba yolwandle
Olu hlobo lwe-slug unokutya kwi-debris, algae okanye inxenye yeplankton kunye nenkunkuma ifunyenwe elwandle. Ukondla, baqokelela zonke izinto ezinqabileyo eziwayo ngenxa yokusetyenziswa kweentambo zabo ezandisiweyo ngaphezulu kolwandle.
Ukutya ukutya, basebenzisa iinyawo zabo ezimilise ityhubhu ukwenza inkqubo yokwemba kwi-substrate. Iminqwazi ebinomlomo wayo igutyungelwe yincindi ebanceda babambe ukutya okumileyo emva kokwenza ukombiwa.
Nje ukuba izidalwa zingene emlonyeni, zidlula ngaphakathi apho zithathwa zisiwe kumathumbu amancinci ukuze zetyiswe. Njengoko kulindelekile, wakube ukwenzile ukutya kwaye ufumene izakha mzimba eziyimfuneko emzimbeni wakho, ulahla into engakuncedisiyo ngendlela yelindle nenkunkuma.
Kule ndlela yokuphila enomdla sinokuthi ukusebenza kwayo kwindalo yolwandle Ukucoca ii-substrates kunye nokuchumisa umhlaba ngediphozithi zazo. Inani elikhulu lezi zilwanyana libangela iimeko zokusingqongileyo ukuba zitshintshe imeko yazo kunye neekhemikhali.
Ukongeza, ngokwaphula ukutya kubukhulu obuncinci, banceda iibhaktheriya ukuba zibe kukutya.
Ukugqiba ngolwazi malunga nekhukhamba yolwandle, siza kuthetha ngokuzala kwayo. Inkqubo yokuzala kwezi zilwanyana yenziwa ngaphandle. Oko kukuthi, nangona ezinye iintlobo ziyi-placenta viviparous, ngesiqhelo ukuba ukwakheka komntu omtsha kwenzeka ngaphandle. Oku kuchumisa kwenzeka xa kugxothwa isidoda kunye neqanda yindoda nebhinqa.
Nje ukuba iqanda liqandusele, imibungu eza ekukhanyeni idada ngokukhululekileyo. Kukwinqanaba lesithathu lophuhliso lwabo ukukhula kweentente. Ixesha lokuvelisa kwakhona ikhukhamba yolwandle kube kanye ngonyaka, rhoqo emva kweminyaka emibini. Azichazeki kwaphela xa kuziwa ekuveliseni kwakhona, ke akukho siqinisekiso sokuba ziya kwenzeka nini.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungazi ngcono ikhukhamba yolwandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » Ikhukhamba yolwandle
Ucingo olu lunomdla kakhulu, bendingazi ukuba ikhukhamba yaselwandle ikhona 🙂